Izingilazi Ze-Ski Avalanche Zimnyama / Zimnyama - ULLER
Okumnyama / Okumnyama
Izibuko zeSki ezinama-lenses we-Photochromic Polarized avumelanisa ukukhanya kwawo ezimeni zezulu. Ziyahlukahluka kusuka ku-CAT.1 ziye ku-CAT.3. Ngenxa yokusebenza kwako okuhlukahlukene, zizokunikeza ukusebenza okuphezulu kakhulu ngezinsuku ezinelanga nezinsuku ezinezimo zezulu ezimbi kakhulu: inkungu, iqhwa, imvula, njll.
I-Uller® Mask eneLenschchicic Lens
IPHEPHA LESITHUTHA SAMAHHALA
Le modeli yemaski inamalensi e-Photochromic futhi nawo aqandisiwe. Ngokungangabazeki amalensi ane ubuchwepheshe obuthuthuke kakhulu emakethe. Isici esibaluleke kakhulu samalensi we-Photochromic ukuthi iguqulela ngokuzenzakalela inani lokudluliselwa kokukhanya okukuvumela ukuba kudlule ku-lens ngokuya ngezimo zezulu, okungukuthi, uma kuwusuku olunelanga kakhulu, amalensi Bazokuba mnyama ukuze bakuphephe ekukhanyeni, kepha uma kuwusuku olunamaqhwa amakhulu noma inkungu esindayo, lokhu kuzocaca kahle ukuze ubone kangcono ekukhanyisweni okuphansi emvelweni futhi ngaleyo ndlela uthuthuke ukubonakala nokukhululeka.
Ngokuvikelwa kwe-UV400, ilensi iguquguquka isuka esigabeni 3 iye esigabeni 1 ngokuya ngenani lokukhanya okukhona. Yilensi eguquguqukayo ngokweqile eyenza i-100% kunoma yisiphi isimo sezulu.
Ngezinsuku ezinesimo sezulu esibi kakhulu (iqhwa, imvula noma inkungu) izoba isigaba 1.
Kepha ngezinsuku ezinelanga impela, ngokuguquguquka kuzoguqukela esigabeni 3